Jubbaland:-Waxaan uga digaynaa Madaxda Dowladda in ay iska indhatiraan baaqyada & digniinaha Saamilayda Siyaasadda! | Banaadir Times
HomeUncategorisedJubbaland:-Waxaan uga digaynaa Madaxda Dowladda in ay iska indhatiraan baaqyada & digniinaha...
Dowlad goboleedka Jubbaland oo warsaxaafadeed kasoo saartay arrimaha doorashooyinka dalka, xaaladaha kala guurka ah ee dalka ayaa ku celisay in dowladda Faderaalka Soomaaliya ay ku hayso faragelinta gaar ahaan gobolka Gedo ee Koofurta Soomaaliya.
Previous articleWasiir Jamaal:-Shaqo ay Soomaali qaban karto ayaa farsamo yaqaano ajanabi ah dibadda looga keena sida ka jirta Xalane!
Next articleMadaxweyne Farmaajo. oo balan qaaday Doorashada in ay ku dhaceeso waqtigeeda